काठमाडौं, माघ ९–तिहाड जेलमा रहेका निर्भया प्रकरणका चारै दोषीलाई कारागार प्रशासनले सूचना थमाउँदै उनीहरुको अन्तिम इच्छा सोधेको छ । उनीहरुलाई सोधिएका छ, ‘१ फेब्रुअरीमा हुने फाँसीअघि आफ्नो अन्तिम इच्छा के छ ? अन्तिममा कोसँग भेट्न चाहान्छौ ? तिमीहरुको नाममा केही सम्पत्ति छ कि । यदी छ भने कसको नाममा दर्ता गर्न चाहान्छौं । कुनै धर्मगुरुलाई बोलाउन चाहान्छौं ?’ यसबीच चारमध्ये एकजनाले जिन्दगी सकिने त्रासका कारण खाना खान छाडेका छन् । कारागार अधिकारीका अनुसार विनयले दुई दिनदेखि खाना खान छाडेका हुन् । बुधबार प्रहरीले बल गरेपछि थोरै खाना खाएका थिए । मंगलबार बिहानदेखि अचानक पवनको खानामा पनि कमी आएको छ ।
मुकेश र अक्षयमाथि खाना कम खाने वा छोड्नाले शरीरमा केही असर देखिएको छैन । मुकेशले फाँसीबाट बच्न जति उपाय थिए ती सबै प्रयोग गरिसकेका छन् । क्षमायाचनाका लागि राष्ट्रिपति रामनाथ कोविन्दले पनि अस्वीकार गरेका छन् । अब अन्य तीनजनासँग अपिलको विकल्प बाँकी नै रहेको छ । यस्तै दुई जनाको सुप्रिम कोर्टमा क्यरेटिव पिटिसन आवेदन दिने कानुनी उपचार बाँकी छ । कारागार सुत्रअनुसार चारै हत्यारालाई तिहाड जेलको नम्बर–३ मा अलग–अलग सेलमा राखिएको छ । हरेक दोषीको सेल बाहिर दुई सेक्युरिटी गार्ड तैनाथ गरिएको छ । गार्डमध्ये एक हिन्दी र अंग्रेजी बुझ्न नसक्नेवाला तमिलनाडुका स्पेसल प्रहरी जवान र एक तिहाड जेल प्रशासनको राखिएको छ ।
हरेक दुई घण्टामा यी गार्डसलाई आरामका लागि समय दिइएको छ। सिफ्ट बदल्दा नयाँ गार्डस तैनाथ गरिन्छ । चारै दोषीको फाँसीको नयाँ समय १ फेब्रुअरी ६ बजे तय गरिएको छ । यदि यसबीच मुकेशबाहेक अन्य तीन जनाले अपिल गरेमा यो विषय केही पर धकेलिन सक्छ । कानुनी जानकारका अनुसार फाँसीका लागि एक नयाँ मिति तय गरिने छ । उनीहरुलाई फाँसीमा झुन्ड्याउन एक अर्को नयाँ परीक्षा गरिएको छ ।
रियलको जितमा बेलको गोल, बार्सिलोनाको संघर्षपूर्ण जित